လက်တင် ဂုဏ်ထူးများ - ဝီကီပီးဒီးယား
လက်တင်ဂုဏ်ထူးများမှာ လက်တင် ဘာသာအသုံးပြုရေးသားသည့် စာပိုဒ်တို စကားလုံးများဖြစ်ပြီး ကောလိပ်များ နှင့် တက္ကသိုလ်များရှိ ဂုဏ်ထူးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ဖော်ပြပြီီး ပညာသင်နှစ်ဘွဲ့ပေးအပ်ရာ၌ ရရှိကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤစနစ်ကို အမေရိကန် နှင့် ကနေဒါ တို့တွင် အဓိကအသုံးပြုသည်။ ၎င်းကို အင်ဒိုနီးရှား နှင့် ဖိလစ်ပိုင် ကဲ့သို့ ဥရောပကိုလိုနီသမိုင်းရှိသည့်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံ အချို့တွင် အသုံးပြုကြသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ၌ ဤစကားစုများ၏ အဓိပ္ပာယ်များကို လက်တင်မူရင်းစာလုံးများအစားအသုံးပြုကြသည်။ ဂုဏ်ထူးနှင့်အတူရ ဂုဏ်ထူးဒီဂရီကို မရောထွးသင့်ပေ။ အချို့နိုင်ငံများတွင်လည်း ဂုဏ်ထူးဆောင်ဒီဂရီ ပေးကြအပ်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် ကောလိပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်စည်းမျဉ်းမားတွင်ကျောင်းသားတစ်ဦး၏လိုက်နာရမည့်သတ်မှတ်ထားသောသတ်မှတ်ချက်များကိုဖော်ပြထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျောင်းသားသည်သတ်မှတ်ထားသောပျှမ်းမျှအဆင့်တစ်ခုရရှိရန်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းအတွက်ဂုဏ်ထူးစာတမ်းတင်ရန်၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်အစီအစဉ် ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်အစောပိုင်းဘွဲ့ရရန်လိုအပ်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုတက္ကသိုလ်က၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စံချိန်စံညွှန်းများသတ်မှတ်။ ဤစံနှုန်းများကွဲပြားသဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောအဖွဲ့အစည်းများမှပေးအပ်သည့်လက်တင်ဂုဏ်ထူးများသည်အဆင့်အမျိုးမျိုးကိုကိုယ်စားပြုနိုင်သည်။ အလားတူပင်အချို့သောအဖွဲ့အစည်းများသည်ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများအတွက်လက်တင်မဟုတ်သောဂုဏ်ထူးများ (သို့မဟုတ်ထပ်ဆောင်း) ကိုပေးအပ်သည်။ Wisconsin-Madison တက္ကသိုလ်တွင် အတန်းအစားအပေါ် အခြေခံ၍ ရိုးရိုးတန်းတန်းအင်္ဂလိပ်စာဂုဏ်ထူးတန်းများရှိသည်။ 
ဂုဏ်ထူးများကို တက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများ အတွက် ချီးမြှင်ကြသည်။ ထိုဘွဲ့ရရှိသူတို့၏ ဝင်ငွေနှင့် ဥပဒေကျောင်းမှ ဘွဲ့ရများနှင့်အတူ ဘွဲ့ရသူတို့၏ရဲ့လက်ခံရရှိကျောင်းသားများကို ဂုဏ်ထူးတန်း သို့မဟုတ် ဒေါက်တာဘွဲ့ ရှိမှုသည် ရှိသော်လည်း အင်မတန်မှပင် ရှားပါသည်။ အဆိုပါဂုဏ်အသရေပုံမှန်အား ဒီပလိုမာ အပေါ်ညွှန်ပြနေသည်။ လက်တင်ဂုဏ်ထူးမကြာခဏအဖြစ်ဘွဲ့ရဥပဒေကျောင်းကိုကျောင်းသားကျောင်းသူများအပေါ်၌အပ်နှင်းထားသည် ဂျူရီဆရာဝန် သူတို့ယေဘုယျအားအပေါ်မှာအခြေခံထားသည့်အမှု၌ဖြစ်စေ JD, အတန်းအစားရာထူး သို့မဟုတ် တန်းအမှတ်ပျမ်းမျှအား ။
၁.၂ ပေါင်းစည်း ဘုရင့်နိုင်ငံ
မြောက်အမေရိကတွင် လက်တင်ဂုဏ်ထူးများကို မကြာခဏ (ကဲ့သို့သောဘွဲ့ကြိုဒီဂရီများအတွက်ကောလိပ်နှင့်တက္ကသိုလ်များတွင် အသုံးပြုနေကြသည်။ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ သို့မဟုတ် သိပ္ပံဘွဲ့ ) နှင့်အဘို့ ဂျူရီဆရာဝန် ဥပဒဒီဂရီ။ သူတို့ကယေဘုယျအားဖြင့်ကဲ့သို့သောအခြားမည်သည့်ဒီဂရီ, များအတွက်အသုံးပြုကြသည်မဟုတ် သခင်၏ဒီဂရီ သို့မဟုတ် Ph.D ဘွဲ့ကို နှင့် MD ဒီဂရီ။ အဖွဲ့အစည်းအများစုသည်လက်တင်ဂုဏ်ထူးအဆင့်နှစ်ဆင့်သုံးခုကိုအသုံးပြုသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအတိုင်းတက်သည်။
ကမ် လာဦဒေ, "ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်အတူ" အဓိပ်ပာယျ။ ဤအခွင့်ထူးကိုပုံမှန်အားဖြင့်ထိပ်တန်း ၂၀%၊ ထိပ်တန်း ၂၅%၊ သို့မဟုတ်အထက်တန်း ၃၀% မှဘွဲ့ရများအားအဖွဲ့အစည်းပေါ် မူတည်၍ ချီးမြှင့်သည်။  
မာဣဉာ ကမ် လာဦဒေ, "ကြီးမားသောချီးမွမ်းခြင်းနှင့်အတူ" ကိုဆိုလိုသည်။ ဤဂုဏ်အသရေကိုတက္ကသိုလ်ပေါ် မူတည်၍ ထိပ်ဆုံး ၁၀% (သို့) သူတို့၏အတန်း ၁၅% အထက်ဘွဲ့ရများအားချီးမြှင့်သည်။
ဆူမာ ကမ် လာဦဒေ (အမြင့်ဆုံးသောချီးမွမ်းခြင်း) ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ဤဂုဏ်အသရေကိုတက္ကသိုလ်ပေါ် မူတည်၍ ထိပ်ဆုံး ၁%၊ ထိပ်တန်း ၂% သို့မဟုတ်ထိပ်တန်း ၅% ဘွဲ့ရများအားချီးမြှင့်သည်။ အချို့သောအဖွဲ့အစည်းများသည် ဆူမာ ကမ် လာဦဒေ ဂုဏ်ထူးကို ချီးမြှင့်ခြင်းမရှိသလောက်ပင် ရှားသည်။
အချို့အဖွဲ့အစည်းများတွင် ထမယပ်မံချီးမြင့်ရသည့် ဂုဏ်ထူးများရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်တက္ကသိုလ်အချို့တွင်“ အလွန်ကြီးမားသောချီးမွမ်းခြင်း” ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသော maxima cum laude သည် မာဣဉာ နှင့် ဆူမာ ဂုဏ်ထူးများကြားကကြားခံအရာဖြစ်သည်။ ဆူမာ ဂုဏ်ပြုမှုကိုပြီးပြည့်စုံသောပညာရေးဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများရှိသောကျောင်းသားများအတွက်သာသီးသန့်သိုထားသည့်အခါတစ်ခါတစ်ရံအသုံးပြုသည်။   ရှားပါးစွာအသုံးပြုသောခြားနားချက်မှာ“ ထူးချွန်သောချီးမွမ်းခြင်း” ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသော egregia cum laude ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အသုံးပြုသည်ဆိုပါကအထူးတလည်ခက်ခဲသည့်ဘာသာရပ်နယ်ပယ်တွင်သို့မဟုတ် ဆူမာ ကမ် လာဦဒေဂုဏ်ထူးရရှိသောကျောင်းသားများအတွက်ဖြစ်စေ၊ ပုံမှန်မဟုတ်သောဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်စေဖြစ်သည်။ 
၁၈၆၉ ခုနှစ်တွင် ဟားဗတ်ကောလိပ် သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ပထမဆုံးဘွဲ့ပေးအပ်နိုင်ခဲ့ပြီး၊ ၁၈၇၂ မှ ၁၈၇၉ အထိ ဘွဲ့ရ များအားဆုချီးမြှင့်သောလက်တင်ဂုဏ်ထူးနှစ်ဆုသည် ကမ် လာဦဒေ နှင့် ဆူမာ ကမ် လာဦဒေ ဖြစ်သည်။ ၁၈၈၀ မှစပြီး မာဣဉာ ကမ် လာဦဒေ ကိုလည်းချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
၁၈၉၅ ခုနှစ်၌ အမ်းမာစ်ထ် ကောလိပ်ရှိ ကောလိပ်သမိုင်းပညာရှင် ဝီလျံ ဆေးမော်ရ် ထိုင်းလာက အမ်းမာစ်ထ်၏ လက်တင်ဂုဏ်ထူးစနစ်ကို ၁၈၈၁ အထိခြေရာခံခဲ့ပြီး အမ်းမာစ်ထ် ကောလိပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဂျူးလိယက်စ်း ဟော်လေး စီအယ်လ်အိုင် နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် မှ မှတ်တမ်း တင်ထားသည်။
ဗြိတိန်တွင် လက်တင်စကားလုံး ကမ် လာဦဒေ ကို လက်တင်ပုံစံသင်တန်းဆင်းလက်မှတ်များချီးမြှင့်သည့် အချို့တက္ကသိုလ်များတွင် အသုံးပြုသည်။ (ဥပမာ: အက်ဒင်ဘတ် တက္ကသိုလ်)ဖြစ်သည်။ ဂုဏ်ထူးဘွဲ့များပေးအပ်ရာ၌ ဆူမာ ကမ် လာဦဒေ ထက်ပရီမီ အော်ဒီနစ်ပထမတန်းစားဘွဲ့ကိုအ အသုံးပြုကြသည်။ တရားဝင်ဘွဲ့လက်မှတ်များတွင် အင်္ဂလိပ်စာကို အသုံးပြုပါသည်။ 
ဘွဲ့ကြိုဘွဲ့အတွက် လက်တင်ဂုဏ်ထူးများကို အမေရိကန် ၊ အစ္စရေး ၊ အင်ဒိုနီးရှား ၊ ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ ၊ ဖိလစ်ပိုင် နှင့် ကနေဒါစ သည့် နိုင်ငံအနည်းငယ်တွင်သာ အသုံးပြုကြသည်။ ကျန်နိုင်ငံများတွင် အသုံးပြုသည့် ဗြိတိန်ဘွဲ့ကြိုဘွဲ့ခွဲခြား (ဓနသဟာယတိုင်းပြည်များတွင် အသုံးပြုကြပြီး နှစ်မျိုးကျင့်သုံးသည့် နိုင်ငံများလည်း ရှိကြသည်။) ဩစတြေးလျ, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ဘာဘေးဒိုးစ, ဘရာဇီး, ကိုလံဘီယာ, ဂျော်ဂျီယာ, ဟောင်ကောင်, အိန္ဒိယနိုင်ငံ, အိုင်ယာလန်, ဂျမေကာ, ကင်ညာ, နယူးဇီလန်, နိုင်ဂျီးရီးယား, ပါကစ္စတန်, စင်္ကာပူ, သီရိလင်္ကာ, တောင်အာဖရိက, ထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂို သည် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း, ဇင်ဘာဘွေ နှင့်အခြားသောနိုင်ငံများက။ မော်လ်တာ သည် ဒီဂရီလက်မှတ်များအတွက် လက်တင်ဂုဏ်ထူးများကို အသုံးပြုသော်လည်းဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ပုံစံကိုမှတ်တမ်းတွင်ပြထားသည်။
ဩစတြီးယား တွင်လက်တင်အမေရိကသည် ပါလက်စတိုင်းဘွဲ့အတွက် sub auspiciis Praesidentis rei publicae ( ပြည်ထောင်စုသမ္မတ၏အောက်ရှိ ) ဖြစ်သည်။ လျှောက်ထားသူများသည်အထက်တန်းကျောင်းနှင့်တက္ကသိုလ်တစ်လျှောက်လုံးတွင်ထူးချွန် အဆင့်များ ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ရရှိရန်အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ တစ်နှစ်လျှင်ပါရဂူဘွဲ့ရရှိသော လူဦရေးစုစုပေါင်း ၂,၅၀၀မှ (ဥပမာ ၀.၈ရာနှုန်း) အနက် ၂၀ယောက်ခန့်သာလျှင် auspiciis ဘွဲ့ရရှိကြသည်။
ဘယ်လ်ဂျီယမ်, တက္ကသိုလ်ဒီဂရီများ၌ ချီးမြှင့်ရန် သတ်မှတ်ချက်များ ဖြစ်သည်  :
ကမ် ဖရုဦကတူ <၆၈ရာနှုန်း (ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့် "ကျေနပ်မှု"၊ ဒတ်ခ်ျတွင် "အိုဗိုဒူး လစ်ဗာအီဇယ်_ လုံလောက်သည်")
ကမ် လာဦဒေ > ၆၈ရာနှုန်း (ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့် "အာဗေ ဒိစတန့်စယွန် _ဂုဏ်ထူးနှင့်အတူ"၊ ဒတ်ခ်ျတွင် "မတ်အွန်မတ် ၐခိုက်ဒင်" )
ကမ် လာဦဒေ > ၇၇ရာနှုန်း (ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့် "အာဗေ ဂွန်းအွန် ဒိစတန့်စယွန်_ကြီးမြတ်သောဂုဏ်ထူးနှင့်အတူ ၊ ဒတ်ခ်ျတွင် "grote onderscheiding")
ဆူမာ ကမ် လာဦဒေ > ၈၅% (ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့် "avec la plus grande distinction", ဒတ်ခ်ျတွင် "grootste onderscheiding")
ဘရာဇီး တွင်တက္ကသိုလ်အများစုသည်ကျောင်းသားများအားဂုဏ်ပြုခြင်းမပေးပါ။ အဲဒီလိုသောအနည်းငယ်တက္ကသိုလ်များသည်များထဲတွင် Instituto Tecnológicoက de Aeronáutica (ARPA NET နောက်ပိုင်းမှာ၏, ITA-နည်းပညာတက္ကသိုလ် Institute က) ဆု 8.5 အထက်တိုင်းတစ်ဦးချင်းစီတန်း (10.0 ထဲက) နဲ့ဘွဲ့ရများအတွက် ကမ် လာဦဒေ၊ မာဣဉာ ကမ် လာဦဒေ ပျှမ်းမျှတန်းနှင့်အတူဘွဲ့ရဘို့ဂုဏ်အသရေ ၈.၅ အထက်နှင့် ၉.၅ အထက်အထက်တန်းအသီးသီး၏ ၅၀% ကျော်နှင့်ပျှမ်းမျှအဆင့် ၉.၅ အထက်ရှိသောဘွဲ့ရများအတွက် ဆုမာ ကမ် လာဦဒေ ဂုဏ်ပြုသည်။ ၂၀၀၉ တွင်ဘွဲ့ရ ၂၂ ဦး သာ ITA တွင်ဂုဏ်ပြုဆုကို ရရှိခဲ့သည် ။ အဆိုပါ Rio de Janeiro မြို့၏ဖက်ဒရယ်တက္ကသိုလ် ဆု 8.0 ကနေ 8.9 မှပျှမ်းမျှတန်းနှင့်အတူဘွဲ့ရများအတွက် ကမ် လာဦဒေ၊ မာဣဉာ ကမ် လာဦဒေ 9.5 ကနေ 9.4 မှ 9.0 အနေဖြင့်ပျှမ်းမျှတန်းနှင့်ပျှမ်းမျှတန်းနှင့်အတူဘွဲ့ရများအတွက် ဆူမာ ကမ လာဦဒေ ဂုဏ်အသရေနှင့်အတူဘွဲ့ရဘို့ဂုဏ်အသရေ 10.0 သို့။ Federal Cearáတက္ကသိုလ်သည်စာမေးပွဲမအောင်ခြင်း ၊ ပျမ်းမျှ ၈.၅ မှ ၁၀.၀ ရသည့်ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများအတွက် မာဣဉာ ကမ် လာဦဒေ ဂုဏ်ပြုဆုကို ချီးမြှင့် ခြင်း နှင့် Academic Extension နှင့် Teaching Initiation နှစ်ခုစလုံးနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းကိုရရှိခဲ့သည်။
အက်စ်တိုးနီးယား တွင် ၂၀၁၀ အထိ ဆူမာ ကမ် လာဦဒေ နှင့် ကမ် လာဦဒေတို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဆူမာ ကမ် လာဦဒေသည် အလွန်ထူးကဲသောအလုပ်အတွက်သာချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်စက်တင်ဘာ ၁ ရက်မှစ၍ ကမ် လာဦဒေ ကိုသာအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤဂုဏ်ထူးကို ဘွဲ့၊ မဟာတန်းနှင့်ဘက်ပေါင်းစုံလေ့လာမှုများ ရရှိမှသာလျှင် ချီးမြှင့်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ၌ "ချီးမွမ်းခြင်း" ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသော kiitusega ဟူသောစကားလုံးကိုပုံမှန် ကမ် လာဦဒေဖြင့အစားထိုးသည်။ ကမ် လာဦဒေ ရရှိရန်အတွက် ၄.၆၀ GPA (၅ ခုအနက်မှ) ရရှိရန်နှင့်စာတမ်းသို့မဟုတ်နောက်ဆုံးစာမေးပွဲအတွက်အမြင့်ဆုံးအဆင့် (A - 5.00) ရရှိရန်လိုအပ်သည်။
အဆိုပါ ဖင်လန် Matriculation စာမေးပွဲ ရဲ့အဆုံးမှာ lukio / အားကစားရုံ များအဆင့်ကိုအသုံးပြုသည်: improbatur (ပျက်ကွက်ငါ; "လက်ခံခဲ့သည်မဟုတ်ပါ"), approbatur (က; "လက်ခံခဲ့သည်") lubenter approbatur (ခ; "လိုလိုလားလားလက်ခံခဲ့သည်"), cum ခြီးမှမျး approbatur (C; "ချီးမွမ်းခြင်းဖြင့်လက်ခံခဲ့သည်"), magna cum laude approbatur (M; "အလွန်ကြီးစွာသောချီးမွမ်းခြင်းဖြင့်လက်ခံခဲ့သည်"), eximia cum laude approbatur (E; "အလွန်ကောင်းမွန်သောချီးမွမ်းခြင်းဖြင့်လက်ခံခဲ့သည်") နှင့် laudatur (L; "praised") ။ ၎င်းတို့သည်ဖင်လန်ကျောင်းများမှ ၄ တန်းမှ ၁၀ တန်းအထိနှင့်ညီမျှသည်။ အချို့သောဖင်လန်တက္ကသိုလ်များသည်မဟာဘွဲ့နှင့်ပါရဂူဘွဲ့စာတမ်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်သည့်အခါ lubenter နှင့် cum laude အကြားထပ်ဆင့်အဆင့်အတန်း မဟုတ်သော Sine laude approbatur (N; နည်းပညာတက္ကသိုလ်များသည်ဂဏန်းစကေး (၁-၅) ကိုအသုံးပြုသည်။
ပြင်သစ် တွင်များသောအားဖြင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံ သည်ဂုဏ်ထူးဆောင်ဂုဏ်ပြုဂုဏ်ပြုဂုဏ်ပြုဆုများ၊ ဂုဏ်အသရေ နှင့် ဂုဏ်အ သ ရေ ရှိသူများ ကိုအသုံးပြုသည်။ သို့သော် Grandes Écoles ကဲ့သို့သော Institution d'études politiques de Paris, HEC Paris ကဲ့သို့လက်တင်နှင့်အင်္ဂလိပ်ခေါင်းစဉ်များကို “ ဆူမာ ကမ် လာဦဒေ” /“ အမြင့်ဆုံးဂုဏ်ထူးဖြင့်ဘွဲ့” ရရှိပြီး ထိပ်ဆုံး ၂% အတွက်နှင့် “ ကမ် လာဦဒေ” / နှင့်အတူဘွဲ့ရရှိခဲ့သည် တစ်နှစ်၏လာမည့် 5% အတွက် ဂုဏ်ပြု " ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစ၍ ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်မှုသည် ပါရဂူဘွဲ့ ပြီးဆုံးခြင်းအတွက်အသုံးပြုခြင်းကိုရပ်စဲခဲ့သည်။ 
ဂျာမနီနိုင်ငံ တွင်ဘွဲ့အမျိုးမျိုးမှာ - ဘာသာရေးထုံးတမ်း (“ လျောက်ပတ်စွာအပ်နှင်းခံရသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာလိုအပ်ချက်များပြည့်စုံသည်”)၊ ကမ် လာဦဒေ (ဂုဏ်ထူးဖြင့်)၊ မာဣဉာ ကမ် လာဦဒေ (အလွန်ဂုဏ်ထူးများဖြင့်) နှင့် ဆူမာ ကမ် လာဦဒေ (အမြင့်ဆုံးဂုဏ်ထူးများဖြင့်) ဖြစ်သည် ။ ဒီဘွဲ့အများစုကိုပါရဂူဘွဲ့ချီးမြှင့်တဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့်သုံးပါတယ်။ ဒီပလိုမာတွေ၊ ဘွဲ့တွေဒါမှမဟုတ်မဟာဘွဲ့တွေမဟုတ်ပါ။ ဒီဂရီအတွက်ကိန်းဂဏန်းအဆင့် ၁.၀ (“ အလွန်ကောင်းသည်”) နှင့် ၄.၀ (“ pass”) နှင့် ၅.၀ (“ ကျရှုံး”) ကိုပေးပါတယ်။ ။
ဟန်ဂေရီ မှာတော့ဒီဂရီ၏အကွာအဝေး - ဂျာမန်စနစ်နှင့်ဆင်တူသည် - is: cite လာဦဒေ (ဂုဏ်ထူးနှင့်အတူ)၊ ဆူမာ ကမ် လာဦဒေa c(အမြင့်ဆုံးဂုဏ်ထူးနှင့်အတူ) သည်ရိုး ထုံးတမ်းစဉ် ("လျောက်ပတ်" အပ်နှင်းဆိုလိုသည်မှာလိုအပ်ချက်များကိုပြည့်စုံ၏) ။ ဒီဘွဲ့များကိုတက္ကသိုလ်ဒီပလိုမာများနှင့်သိပ္ပံနယ်ပယ်အချို့ (ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်အနည်းငယ်မျှသာ) တွင်သာအသုံးပြုသည်။ ဒီဂရီအဆင့်များသည်နောက်ဆုံးစာမေးပွဲများမှရရှိသောပျှမ်းမျှရမှတ်များနှင့်တက္ကသိုလ်လေ့လာမှုမှရမှတ်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။
အီတလီနိုင်ငံတွင် ကမ် လာဦဒေ သင်္ကေတ ( "con lode" သည် အီတလီ နှင့်တူညီသည်) စာမေးပွဲများ (၃၀/၃၀) နှင့်ဒီဂရီ (၁၁၀/၁၁၀) နှစ်ခုလုံးအတွက်အဆင့်အမြင့်ဆုံးအဆင့်အတန်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကမ် လာဦဒေ (30elode) စာမေးပွဲအောင်ခြင်းသည်ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းသည်ပျမ်းမျှအတန်းကိုဩဇာသက်ရောက်ပြီး၎င်းသည်ဂုဏ်ပြုခံရသည့်ကျောင်းသားအတွက်အသုံးဝင်သည်။ အီတလီနိုင်ငံတွင် " 110elode " (110-point system ကိုအသုံးပြုသောအဖွဲ့အစည်းများ) သည်ပညာသင်ကြားရေးကာလအတွင်းရရှိနိုင်သောအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကအခြားသင်္ကေတများ (၎င်းကိုရရှိခဲ့သူများအားသာပေးခဲ့သည်) "lode") ။ ဤရွေ့ကားပါဝင်သည် : bacioeabbraccio accademico ("ပညာရေးဆိုင်ရာအနမ်းနှင့်ပွေ့ဖက်ခြင်း") menzione d'onore ("ဂုဏ်ပြုဖော်ပြခြင်း") နှင့် dignità di stampa ("ပုံနှိပ်ခြင်း၏ဂုဏ်သိက္ခာ") နှင့်အမျိုးမျိုးသောတက္ကသိုလ်မှသတ်မှတ်ချက်များအပေါ်အခြေခံထားသော်လည်းတရားဝင်မဟုတ်သော တန်ဖိုး။
ခုနှစ်တွင် မော်လ်တာ ဘွဲ့ဂုဏ်ထူး ဆူမာ ကမ် လာဦဒေ ပထမအဆင့်
ဂုဏ်ထူးကိုရည်ညွှန်းသည်ဘွဲ့များအတွက်ာဣဉာဂကမ် လာဦဒေ ဒုတိယအဆင့်ဂုဏ်ထူးထူး (အထက်ဌာနခွဲ) ကိုရည်ညွှန်းသည်ဂိ Probatus တတိယအတန်းအစားဂုဏ်ထူးရည်ညွှန်းနေတုန်း, ကမ် လာဦဒေ ဒုတိယအဂုဏ်ထူး (အောက်ပိုင်းဌာနခွဲ) ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၃ နှစ်သက်တမ်းရှိသည့်ဆေးဝါးဘွဲ့ ၅ နှစ်ဖြစ်သော Egregia Cum Laude ကို ရရှိသည်။ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာများနှင့်မဟာဘွဲ့များကို Distinctioဆူမာ ကမ် လာဦဒေude)၊ Merit နှင့် Pasမာဣဉာ ကမ် လာဦဒေude) သို့မဟုတ် Pass (Bene Probatus) အဖြစ်ချီးမြှင့်နိုင်သည်။
မက္ကဆီကို တွင်, စပိန်ဘာသာဖြင့် "menciónhonorífica" ဟုလည်းလူသိများသော ကမ် လာဦဒေ သည်အဓိကတက္ကသိုလ်များကဘွဲ့၊ မဟာဘွဲ့နှင့်ပါရဂူဘွဲ့ဘွဲ့များအတွက်ထူးချွန်သောစာတမ်းကိုအသိအမှတ်ပြုရန်အသုံးပြုသည်။ အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဆုများကိုအမြင့်ဆုံးနောက်ဆုံးတန်းဖြစ်သောကျောင်းသားအားပေးသည် Presea LázaroCárdenas (သို့) Gabino Barreda တံဆိပ်) နှင့်ဒီပလိုမာကို ကမ် လာဦဒေ ပုံစံအဖြစ်ပေးသည် ။
နယ်သာလန်နိုင်ငံ တွင်, ဘွဲ့နှင့်မဟာဘွဲ့အတွက်နှစ် ဦး စလုံး, ကမ် လာဦဒေ (ဂုဏ်ထူးနှင့်အတူ) ဂုဏ်ထူးတစ် ဦး တည်းသာအသုံးပြုသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းသည်ထူးခြားသောအောင်မြင်မှုကိုမှတ်သားရန်သီးသန့်ထားရှိသည်။ ၎င်းသည်ပျှမ်းမျှအနည်းဆုံးအမှတ်ပျမ်းမျှပေါ်တွင်မူတည်သည်။ တခါတရံတွင်မြင့်မားသောအမှတ်အသားရှိသော်လည်းကျောင်းသားသည်စာမေးပွဲများအနက်တစ်ခု (၆- ခုအမြင့်ဆုံးရှိသည့် ၁-၁၀ စကေးဖြင့်) အမှတ် (၆) သို့နိမ့်သောအခါပျောက်ဆုံးသွားသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ၂ ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာ ကမ် လာဦဒေ distinction ကိုရရှိသည်။ ၎င်းဂုဏ်သည်မဟာဘွဲ့ရသူများထက်ပင်ရှားပါးသော်လည်း ပီအေ့ခ်ျဒီ ဘွဲ့ ကမ် လာဦဒေ ရရှိရန်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအချက်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂလဒိivity္ဌာန်ကျခြင်းကြောင့်အချို့တက္ကသိုလ်များနှင့်လေ့လာမှုနယ်ပယ်များသည်ပါရဂူဘွဲ့အတွက် ကမ် လာဦဒေ ကို ရံဖန်ရံခါချီးမြှင့်လေ့ရှိသည်။ ဒတ်ခ်ျတက္ကသိုလ်ကောလိပ်များတွင် ကမ် လာဦဒေ ၊ မာဣဉာ ကမ် လာဦဒေ နှင့် ဆူမာ ကမ် လာဦဒေ တို့ကို သုံးနိုင်သည်။
ဖိလစ်ပိုင်တွင် အငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်း - K-12 သင်ရိုးညွှန်းတမ်း အသစ်အောက်ရှိအထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသားများသည်ဖိလစ်ပိုင်လက်တင်ဘာသာပြန်ဆိုချက်များကို သုံး၍ ဂုဏ်ပြုသည့်စနစ်ဖြစ်သည်။ ပျှမ်းမျှအဆင့် ၉၀ မှ ၉၉ တန်းကျောင်းသားများအားလက်တင်ဘာသာဖြင့်“ ကမ် လာဦဒေ” သို့မဟုတ်“ ဂုဏ်ထူးဆောင်” ဆုများချီးမြှင့်ခြင်းခံရပြီး DepEd တံဆိပ်ဖြင့်ကြေးတံဆိပ်ကိုရရှိလိမ့်မည်။ ပျှမ်းမျှနောက်ဆုံးတန်း 95-97 ရှိသူများသည် "မာဣဉာ ကမ် လာဦဒေ" သို့မဟုတ် "high honors with") နှင့်တံဆိပ်တူညီသောငွေတံဆိပ်ဆုကိုခံရသည်။ ပျှမ်းမျှအဆင့် ၉၈ မှ ၁၀၀ အထိရှိသောကျောင်းသားများအား“ May Pinakamataas na Karangalan” (“ ဆူမာ ကမ် လာဦဒေ” သို့မဟုတ်“ အမြင့်ဆုံးဂုဏ်ထူးများဖြင့်”) နှင့်အတူတူပင်သတ်မှတ်ထားသောရွှေတံဆိပ်ချီးမြှင့်ခံရလိမ့်မည်။ ကောလိပ်တွင်ကျောင်းသားများကို Cum Laude၊ Magna Cum Laude နှင့် Summa Cum Laude တို့ ဟူ၍ ရည်ညွှန်းသည်။ 
ရုရှား ၌ဂုဏ်ပြုစနစ်သည်အတန်းအမှတ်ပျမ်းမျှအပေါ်အခြေခံသည်။ cum laude ဒီဂရီ ("сотличием" ("s otlichiem") ကိုရုရှားဘာသာဖြင့် (သို့) "ထူးကဲစွာဖြင့်") ၅.၀ မှတ်အနက်မှအနည်းဆုံး ၄.၇၅ လိုအပ်သည်။  ဘွဲ့ရသည်နောက်ဆုံးစာမေးပွဲအားလုံးအပေါ်တွင်ပြီးပြည့်စုံသောအဆင့်ကိုရရှိသည်။ များသောအားဖြင့်ကျောင်းပြီးသောကျောင်းသားအားလုံး၏ ၂% အောက်သာလျှင်ဤအရာကိုပြီးမြောက်သည် (တက္ကသိုလ်နှင့်နှစ်ပေါ် မူတည်၍) ။ စစ်ကျောင်းများတွင်အနီရောင်ဒီပလိုမာကိုထူးခြားသောစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ရွှေတံဆိပ် ("ဆူမာ ကမ် လာဦဒေ") နှင့်တွဲဖက်နိုင်သည်။ ရုရှားအထက်တန်းကျောင်းများသည်နောက်ဆုံးစာမေးပွဲအားလုံးနှင့်နောက်ဆုံးစာမေးပွဲမလိုအပ်သောအခြားဘာသာရပ်များအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောရမှတ်ကိုရရှိသောကျောင်းသားအားရွှေတံဆိပ်ချီးမြှင့်သည်။ အထက်တန်းဒီပလိုမာ ("attestat" တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ၄ တန်းမှ ၂ တန်း (ရုရှားလို "ကောင်း" (သို့) ဒုတိယအမြင့်ဆုံးအဆင့်) ဖြစ်သည့်အထက်တန်းကျောင်းသားများအားငွေတံဆိပ်ချီးမြှင့်သည်။ ဏ (polnom) srednem obrazovanii ") ။
စင်္ကာပူ တွင်လက်တင်ဂုဏ်ထူးများ၊ cum laude ၊ magna cum laude နှင့် summa cum laude တို့ကို စင်ကာပူစီမံခန့်ခွဲမှုတက္ကသိုလ်မှ အသုံးပြုသည်။ စင်္ကာပူစီမံခန့်ခွဲမှုတက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ရများသည် GPAs ၃.၄၊ ၃.၆ နှင့် ၃.၈ အသီးသီးတွင် ၄.၀ အနက်အသီးသီးရရှိရမည်ဖြစ်ပြီးလက်တင်ဂုဏ်ထူးများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီရန်အတွက်ချွင်းချက်မရှိပါ။
၎င်းကို Yale-NUS ကောလိပ်တွင်လည်းအသုံးပြုသည်။ ထိပ်တန်း ၅% သည် summa cum laude ၊ နောက် ၁၀% magna cum laude နှင့်နောက် ၂၀% cum laude ကို ရရှိသည်။ Yale-NUS ကောလိပ်တွင်လက်တင်ဂုဏ်ထူးများရရှိရန် CAP လိုအပ်ချက်များမရှိပါ။ 
စပိန် တွင်လက်တင်ဂုဏ်ထူးများ ကမ် လာဦဒေ ကို ပီအေ့ချ်ဒီဘွဲ့အတွက်သာအသုံးပြုသည်။ ဂျူရီအဖွဲ့ဝင်များ၏လျှို့ဝှက်မဲပေးမှုအပြီးတွင်သီးခြားအစည်းအဝေးတစ်ခုတွင်ဖွင့်လှစ်ရန်လိုအပ်သည့်စာအိတ်များ သုံး၍ တညီတညွတ်တည်းလိုအပ်သည်။
ဆွစ်ဇာလန်ရှိ ဒီဂရီ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင် ကမ် လာဦဒေ၊ မာဣဉာ ကမ် လာဦဒေ၊ ဣစီညီ ကမ် လာဦဒေနှင့် ဆူမာ ကမ် လာဦဒေ တို့ကို အသုံးပြုကြသည်။ သို့ရာတွင် တိကျမှန်ကန်သည့် ဂျီပီအေအဖွဲ့အစည်းတွင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ချင်းစီအလိုက် အဆင့်သတ်မှတ်ချက် အသုံးပြုမှု ရှိသည်။
ယူကရိန်း တွင်တက္ကသိုလ်ပညာဂုဏ်ပြုစနစ်သည်ယူကရိန်းပညာရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏ဥပဒေ (၁၆.၁.၀၁၉၉၉၃) (၃.၁၂.၃.၅) ကိုအခြေခံသည်။ ကျောင်းသားတစ် ဦး သည်ဂုဏ်ထူးဖြင့်ဒီပလိုမာဘွဲ့ကိုရရှိရန် ( ကမ် လာဦဒေ) ကျောင်းသားများသည်အမှတ် (၅) (အထူးကောင်းမွန်သည်) အနည်းဆုံးသင်တန်း ၇၅%၊ အမှတ် ၄ (ကောင်းသော) ကိုအများဆုံး ၂၅% ရပြီး၊ ပြည်နယ်စာမေးပွဲများကိုအမှတ် (၅) (သာလွန်သည်) ဖြင့်သာအောင်ပါ။ ထို့အပြင်ကျောင်းသားများကိုမြင်သာသောရလဒ်များနှင့်အတူသုတေသနစီမံကိန်းများတွင်ပါဝင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေကြသည်။ 
↑ Grading Honors။ University of Wisconsin–Madison, Office of the Registrar။ University of Wisconsin System (January 7, 2017)။
↑ Graduation Honors။ NYU။ New York University။ January 12, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “Effective with the September 2008 graduating class,... the GPA cutoffs for each category are determined by the combined GPA distribution from the preceding academic year, all graduation moments included. Summa cum laude: the GPA included within the top5percent of the previous year's graduating class. Magna cum laude: the GPA included within the next 10 percent of the previous year's class. Cum laude: the GPA included within the next 15 percent of the previous year's class.”
↑ Latin Honors။ BU, Office of the University Registrar။ Boston University။ January 12, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “Among graduating seniors in each school or college, Latin Honors are awarded to the top 30% of the class as follows: Summa Cum Laude Top 5%, Magna Cum Laude Next 10%, Cum Laude Next 15%”
↑ Honors at Graduation။ University of Portland (2016)။ January 12, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “Honors are based on the following formula: withinagiven college or school, summa cum laude is awarded to all students who receivea4.00 GPA; maxima cum laude to the next 3%; magna cum laude to the next 7%; cum laude to the next 10%.”
↑ Honors။ La Salle University။ January 12, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “The bachelor’s degree with honors is conferred onastudent who has completed course requirements at the University withacumulative academic index not lower than 3.40 and who has not incurred any academic censure. The candidate who has earned an index between 3.40 and 3.59 is graduated with the distinction Cum Laude. The candidate who has earned an index between 3.60 and 3.79 is graduated with the distinction Magna Cum Laude. The candidate who has earned an index of 3.80 or better is graduated with the distinction Maxima Cum Laude.”
↑ Graduation Honors – CSB/SJU။
↑ Latin Versions of Degree Parchments။
↑ Policy Guidelines on Awards and Recognition for the K to 12 Basic Education Program။ Department of Education။ Philippines။ April 2, 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ January 1, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ LATIN HONOURS AT YALE-NUS COLLEGE။ 26 August 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Про затвердження Положення про організацію навчальног... | від 02.06.1993 № 161 (Сторінка 1 з 2)။ 2017-07-18 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လက်တင်_ဂုဏ်ထူးများ&oldid=698504" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၈:၀၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။